अब कुरा गरौँ यो “घटना” आखिरमा के हो त? ती गाली जसले दिए अनि गाली जसले खाए तिनीहरुले वास्तवमा के जनाउँछन् वा कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् त? र किन घरि-घरि नेपाली समुदाय उपहासको शिकार बनिरहँनु पर्छ? विस्तृत रूपमा बुझौँ अब। भारत एउटा वृहत महादेश हो जहाँ धेरै विकासशील र पछाड़िएका जाति एकैसाथ रहने गर्दछ। विकासशील जातिहरु मूलधारामा रहे भने पछाड़िएकाहरु किनाराकृत भएर बसे। मूलधाराकाहरुले हातमा सत्ता सम्हालेर शासन गर्छन् भने किनाराकृतहरु तिनीहरुको अधीनमा दबेर शोषित भइरहन्छन्। के शासकले शोषितलाई यसरी उपहास गर्नु ठीक हो र? के यसरी नेपाली समाज भारतीय मूलधाराको उपहास मात्र पहिलो चोटी बनेको हो र?
तसर्थ मेनल्याण्ड ईण्डियाले हामीलाई कसरी बुझिरहेका छन्? किन तिनीहरुले त्यसरी बुझिरहका छन्? के-केले वाधा दिएको हो हामीलाई हाम्रो परिचय स्थापित गर्नुमा? अब केही पृष्ठभूमि बुझौँ। सीधै भन्नु हो भने मूलधाराकाहरुले नेपाली केटा देख्नसाथ गोर्खा/चौकीदार अनि केटी देख्नसाथ वेश्या बुझ्छन्। यो धारणा कसरी यिनीहरुकोमा पस्यो, किन पस्यो ? भन्नेबारे चर्चा गरौँ।
८६ को आन्दोलन पछि गन्तीमा मान्छेहरु धनी भए र उब्रेकाहरु झनै गरिबीमा डुबे। २००७ र १७ पछि पनि मानिसहरुले धेरै आर्थिक मार खप्नु पऱ्यो। तर जब-जब पनि आन्दोलन भए गिनी-चुनिन्दा मान्छेहरु मात्र धनी भए। अब नेपाली समाजभित्र पनि धनी र गरीब मज्जाले छुट्टिन थाल्यो। हिजको सुँगुर चराउने आज गाडीको मालिक हुँदा छेउको हर्के चियाको गाँछ नै स्याह्यार्दै छन्। यसरी छिटो धनी हुने प्रवृत्ति दार्जीलिङमा भित्रियो। गरिबी मनमा पनि धैरै आकाङ्क्षाहरु फुल्नु थाल्यो र “easy-money”को संस्कारले वेश्यावृत्ति मात्र बढेन, अपितु गोर्खा समाज नै बलात्कृत हुन पुग्यो। ८६-को आन्दोलनमा भएको यौन-शोषणको विश्लेषण हुनु बाँकि नै छ। २००७ मा राजनैतिक उथुल-पुथुल हुँदा हाक्की “श्रीमती-बदल्ने” (Wife-swap) संस्कार भित्रियो। गोर्खा केटीहरुलाई उपभोगको वस्तुमात्र त हाम्रै स्थानीय तहमा पनि बनाइयो। गोर्खा-चेलीको सम्मानमा चोट हाम्रैले पुऱ्याएर नै अरुको अगाडि नाङ्गिदा पनि लाज मान्न नै छाड़े।
हाम्रैमा यस्ता धेरैवटा संस्कारहरु छन् जसले आर्थिक कारण नभए तापनि वेश्यावृत्तिमा लाग्न कर लगाइरहेका छन्। वेश्यावृत्तिमा लाग्नु अहिले जीविका उपार्जन मात्र नभएर आफ्नो ग्लामरस जीवनशैली मेन्टेन गर्नुको लागि पनि पैसा कमाउने सजिलो माध्यम बनेको छ। अहिले यौनकर्मी सिलीगड़ीको खालपाडा, कोलकताको सोनागाछीमा मात्र होइन, सबैतिर फैलिएको छ। बाटोमा हिँड्दा ठोक्किने पनि हुनु सक्छ। सबै अनलाईन बुकिङ हुन्छन्। भारतको सेलुन-पार्लरहरुमा काम गर्ने केटीहरु यसमा बेसी संलग्न भएको रिपोर्टमा पाउँछौ। सिक्किम, दार्जीलिङबाट सिलगडीमा बसेर सुचारु रुपमा चलिरहेको यौन व्यवसायमा कार्यरत यौनकर्मीको सुची लामै नै हुन्छ। आश्चर्यको कुरा अहिले यस पेशामा विद्यार्थी पनि धेरै मात्रमा संलग्न छन्। यो पेशा यति जटील छ कि कसै एकले यसलाई रोक्न भने सक्दैन तर यसमा होमिनदेखि भने जोगाउँन सकिन्छ। सेक्स ट्रेडले विश्वको आर्थिक गतिविधिसम्मलाई हल्लाउने क्षमता राख्दछ।
गल्ती हरेक तप्काबाट भएको हो। २००९-मा भागोपले सिलगढीको अधिवेषणमा प्रो० लामालाई वक्तव्य राख्न दिए। भर्खर भी.सी. बनेका लामा, नेपाली जगतको ध्रूव तारा नै थिए। प्रशान्त-प्रकृतिको हावा पनि चलिरहेको थियो मूलधाराकै मिडियामा। तसर्थ लामाको वक्तव्य के थियो भने “म आज यहाँसम्म पुगेको छु, मलाई परिचयको सङ्कट छैन” भन्दा मलाई अचम्म लागेको थियो। भागोपले पनि अब नेपालीले सेलिब्रेटी निकाल्नु पर्छ मात्र भने तर केही पनि काम भने गरेन। पछि उही लामा सांसदको भोट हारे पछि फेरि अर्को वक्तव्य आयो “ म पनि केही गरिदिउँ भनेको थिए तर जनताले नै नबुझेर साथ दिएन” गरिदिने अरे? यो सुन्दा लामा अनेपाली पो हो कि झै लाग्यो।
२०१८ मा यौनशोषणको आक्षेप लाग्दा वा सिक्किम विश्वद्यालयको राशि हीनामीनामा C.B.I. जाँचको माग हुँदा, कति लुतेहरुलाई हामीले धरोहर मान्दै थिएछौ भन्ने आभास भयो। यसरी चौकी पाएर मात्र गरिदिन्छु भन्नेलाई जनताले राम्रै छिमलेको थियो। भागोपको दुई सुकमान मोक्तान र मुनिस तामाङ पनि साङ्गठानिक विवादमा यता-उता भइरहे। सी० के श्रेष्ठ अलग्गिहाले। घिसिङकाल देखि बिमल सम्म आएर बिनयकालमा जेल पर्ने आर० पी० वाइबाले GTA-2 खारेज गर भन्न हिचकिच्याउँदैन। गल्ती .D.G.H.C थाप्नु पनि थियो GTA थाप्नु पनि थियो त GTA-2 पनि। आफू चौकीमा बसुञ्जेल सबै ठीक अरु बस्दा विरोध‌ गर्नु मिल्दैन। स्टडी फोरम पनि खदा मालामा नै मक्ख थिए। छताछुल्ल भए पछि खोइ अध्ययन? एउटा आन्दोलन तुहियो त अर्को बीँउ छर्ने काम तिनीहरुको थियो। यस्तै सम्भावित मान्छेहरुले लत्तै छोडिदिए भनौं तिनीहरु देखावाटी नै थिए भनेर छर्लङग भयौँ।
लेखक, भूजेल, शोधार्थी ,भौतिक विज्ञान विभाग,मिजोरम विश्वविद्यालय ,याे उनकाे निजि विचार हाे ।